Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Wizz Air CEO CEO 100 tapitrisa tapitrisa Riles Unions
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Momba ny Hongria • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao isan-karazany
József Váradi, CEO an'ny Wizz Air
Ny fanomezana valisoa ny CEO amin'ny alàlan'ny fanitarana orinasa iray, na inona na inona tombom-bidiny, ny dian-tontolo iainana, ny toetoetran'ny asa, ny fanajana ny zon'olombelona sy ny zon'ny mpiasa ary ny fahasalaman'ny mpiasa dia tena tsy fanajana ny mpiasa ihany fa ny fianakaviany koa fiarahamonina amin'ny ankapobeny.
Wizz Air dia efa nahazo vola tamin'ny vidin'ny mpiasan'ny fitaterana hatry ny ela.
Miatrika toe-draharaha henjana ny mpiasa Wizz Air, karama ratsy, ary fanao tsy ara-drariny, indraindray tsy ara-dalàna aza, avy amin'ny lafiny fitantanana.
Ny fanomezana valisoa an'i József Váradi miaraka amina bonus 100,000,000 XNUMX XNUMX £ amin'ny fampandehanana ny zotram-pitaterana an'habakabaka amin'ity fomba ity dia tsy mendrika ary tsy ekena.
Manameloka ny fanapaha-kevitra handoa bonus 100 tapitrisa £ ho an'ny tale jeneralin'ny Wizz Air ny federasiona ho an'ny mpiasa eropeana József Váradi ho valisoa amin'ny fitomboan'ny fitaterana haingana.
Wizz Air dia orinasa iray manana tantara malaza ratsy manohitra ny fiaraha-monina - fandroahana tsy ara-dalàna, tsy firaharahiana ny zony handamina, ny fitokonana ataon'ny sendika ary ny fanilihana ara-tsosialy, raha tsy hiteny afa-tsy vitsivitsy. Tsy takona afenina ny mpiasan'ny Wizz Air miatrika fepetra miasa mafy, karama ratsy, ary fanao tsy ara-drariny, indraindray tsy ara-dalàna aza, avy amin'ny lafiny fitantanana.
Wizz Air efa ela no nahazoam-bola tamin'ny vidin'ny mpiasan'ny fitaterana. NAHAFINARITRA NY József Váradi miaraka amin'ny bonus 100,000,000 £ ho an'ny fampandehanana ny zotram-pitaterana an'habakabaka amin'ity fomba ity dia tsy mety ary tsy ekena, vao mainka eo afovoan'ny areti-mifindra izay nahatonga ny mpiasa fiaramanidina maro ho tratry ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny asa, loza mety hitranga amin'ny fahasalamana sy fiarovana, ao anatin'izany ny risika ara-pahasalamana ara-tsaina, be loatra ny asa, adin-tsaina, sy harerahana.
Ny ETF dia miantso ny tompon-tany hanafoana ity bonus ity ary miorim-paka izay tombony ho avy ho an'ireo tompon'andraikitra ambony amin'ny kaompaniam-pitantanana amin'ny fananganana orinasa maharitra manana toe-piainana mendrika, tambin-karama mendrika, fifanakalozan-kevitra ara-tsosialy miasa tsara, ary fiadanan'ny mpiasa fa tsy amin'ny fitomboana sy tombony mifototra amin'ny fanararaotana ataon'ny mpiasa.